Inkonzo yokubumba i-sheet yesinyithi-i-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Inkonzo yokuPrinta i-Sheet yesinyithi-i-China China Sheet Metal Sheet yoMvelisi
Ngombulelo kwiinjineli ezinamava ezili-10 kunye neeseti ezingaphezu kwe-30 zezixhobo eziphambili, i-Ouzhan ilungile kwindlela yokwazi kushishino lwesinyithi iminyaka eli-15. I-Ouzhan ikunceda ucofe uyilo lwemveliso yakho nge-DFM kwaye iqinisekise ukuba iinxalenye zetsimbi zakho zinokwenziwa ngokuchanekileyo, ngokufanelekileyo, kunye nomgangatho ohambelana neenkcukacha zakho. Sikholelwa ngamandla ekwenzeni ijig esemgangathweni ye-welding yokuqhuba kulawulo lwenkqubo. I-ERP yethu isenza sikwazi ukulawula ukuveliswa kwangaphakathi kweemveliso ezigqityiweyo ngee-SKU ezininzi.
Imveliso yethu entsonkothileyo eyenziweyo ukuza kuthi ga ngoku yenziwe ngezinto ezingama-320. Sinezinto ezomeleleyo zokuvelisa izixhobo zentsimbi ezintsonkothileyo, ezichanekileyo eziphezulu. Imigca yethu emine yendibano iyakwazi ukuxhasa iinkqubo eziziisekondari kunye nokugqiba ezinje nge-welding, i-riveting, i-powder coating, i-anodizing kunye ne-assembly. Siyakwazi ukubonelela ngenkonzo encinci okanye ukuhambisa iimveliso ezigqityiweyo.
Ukusebenza kwamandla kwe-Ouzhan Precision Sheet Metal:
I-OuZhan inesakhono sokubonelela ngexabiso elifanelekileyo kwiinkonzo zentsimbi kunye neemveliso ezichanekileyo eziphezulu kumgangatho omkhulu weeprojekthi.
-Iinkonzo ezenziwe ngezinto ezenziwe ngephepha ezenziwe ngentsimbi ezenziwe ngexabiso eliphakathi ukuya kweliphezulu.
Uluhlu olubanzi lwezixhobo zesinyithi.
Uluhlu olubanzi lobungakanani obunokuchaneka (0.5mm-20mm).
- iiseti Multiple izixhobo phambili kunye nenkqubo yolawulo ophezulu.
-Ubuchwephesha kunye nokwahluka kwetekhnoloji yokulungisa.
-Umveliso onamandla kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
Kutheni ukhetha iiOuzhan Sheet Metal Fabrication Services
• Ukusika i-Laser CO2 kunye ne-N2
• CNC Sheet Ukugoba 4 & 6 Axis
• TIG, MIG, Ukunyathela
• I-Robot Welding (i-ABB Robot 1410 eneNkqubo yeWelding yeFronius)
• IJig eyenziwe ngesiqhelo
• I-Welding Notching
2. Iinkqubo ezininzi zeSekondari zeNkqubo
Ukongeza kwimashini yensimbi, sigxile kwi-TIG kunye ne-MIG, i-Robot Welding, i-Spot Welding, i-CNC Sheet Bending, i-Riveting, i-PEM, i-Laser Etching, njl.njl.
Sineenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abasuka kwiDyunivesithi yeSayensi neTekhnoloji yase China. Sinokubonelela ngoyilo lwephepha lesinyithi kunye neenkonzo zokulungiswa kwesinyithi.
Sinabasebenzi abahlola umgangatho wobungcali kunye nezixhobo, ngokwemigangatho yamanye amazwe kwiimveliso zakho zokuvavanya, kwaye ukhuphe ingxelo yovavanyo eneenkcukacha yamalungu ephepha lesinyithi.
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ukuba wabelane ngemizobo yakho yamaphepha akho esinyithi kunye nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
Yintoni ukuSebenza kweSetet Sheet kunye nendlela eyila ngayo i-Sheet Metal Works
Isinyithi se-Sheet ayisiyonto ithile. Endaweni yoko, eli gama lisetyenziselwa isinyithi esenziwe ngendlela. Njengomthetho, iphepha lesinyithi linemilo yoxande. Ikwaphawu lokuba ubukhulu bephepha bungaphantsi kobude nobubanzi.
Ukongeza kwisinyithi, ezinye izinto ezininzi ezinje ngobhedu, ialuminiyam kunye negolide kunye neealloys zethusi zinokucutshungulwa zenziwe isinyithi. Ukuze kusetyenzwe ngeshidi yesinyithi, nangona kunjalo, izinto ezisetyenzisiweyo kufuneka zibe neempawu ezithile, okt ubungqingqwa obuthile kunye nokuba ngqongqo, kwaye ngokuqinisekileyo kube yi-ductile, okt ukuba yenziwe. Ezi mfuno zikhokelela kuthintelo ngokubhekisele kwizixhobo ezinokusetyenziswa. Ke, akunakwenzeka ukuba kuqhubekeke izinto ezinobukrakra okanye ezomeleleyo kakhulu kwishiti yesinyithi.
Ngokwale nto, i-sheet yentsimbi yimveliso egqityiweyo enokuveliswa ngaphezulu kwendawo enkulu, apho amaphepha ngokulula ekhanyayo, ebhityileyo, azinzileyo, athambileyo kwaye ethe tyaba. Ngenxa yezi zinto zichaziweyo, zilungele zonke iintlobo zokufaka kunye nokugubungela. Ukongeza, iphepha lesinyithi linokukhubazeka ngeendlela ezininzi, okt linokufakwa nge-welding, ukugoba, ukubetha ngamanqindi okanye ukusikwa. Iintlobo ngeentlobo zeemilo zinokwenziwa kwiphepha lesinyithi, yiyo loo nto isetyenziswa njengesixhobo sokuqala semveliso ezahlukeneyo.
Igama elithi "sheet sheet processing" ligubungela inani elikhulu leenkqubo zokuvelisa. Ngokusisiseko, igama elithi ukusebenza kwesinyithi libhekisa kwimveliso yeemveliso, izinto kunye nezinto ezenziwe ngesinyithi. Ukongeza kwi-welding, ukusika kunye nokugoba, iinkqubo zokwenza iphepha ngetsimbi zibandakanya ukubetha, ukwenza, ukuziqengqa kunye nokujoyina. Ukwenza i-sheet yesinyithi kuhlala kufakwe ekusetyenzisweni kwesinyithi, kunye nala macandelwana alandelayo:
• Ukwakheka kobeko
• Ikhoyili yokufudumeza
• Ukugoba ngenqindi
• Ukusika i-Laser
Kwisakhelo sokulungiswa kwesinyithi, zombini amaphepha athambileyo kunye nokunganyangekiyo anokuveliswa, apho iimpawu ezahlukeneyo zifezekiswa zii-alloys ezahlukeneyo. Umzekelo, kukho izinto ezininzi ezinokongezwa kwisinyithi kwimeko yolwelo ngexesha lomsebenzi wesinyithi kwaye zichonga iipropathi ezibonakalayo zeshidi lesinyithi elivelisiweyo. Ukongeza kwisilicon, i-nickel kunye ne-chromium, ezi zinto zibandakanya i-titanium, ithusi, i-niobium kunye ne-molybdenum.
Izinto zokwenza izinto zeshidi ye-Sheet -Izixhobo ezisetyenziselwa ukuChola i-Sheet Metal
Izinto ezifumanekayo zeMashiti yensimbi ye-Sheet
• IAluminiyam 5052H
• IAluminiyam T5, T6
Intsimbi ebandayo ebandayo (CRS, SAPH440)
Isinyithi esisangqa esishushu (HRS)
Isinyithi (SS304, SS316, SS301)
I-Ouzhan Sheet Metal Fabrication Surface iphela
Nalu ukhetho olubanzi lweenkonzo zokugqiba umphezulu wesinyithi ekukhetheni kwakho iindawo zetsimbi ezenziwe ngomatshini ukuphucula ukubonakala, ukubonakala komphezulu, ukumelana nokubola, kunye nezinye izinto: